သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> ကော်ဇောအပ် -> ကော်ဇောအပ်ချုပ်အထောက်အပံ့
ကျနော်တို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ Taiwan ကော်ဇောအပ်ချုပ်အထောက်အပံ့ ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူ။ တည်ငြိမ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် မူတည်. ထက်သာလွန်အရည်အချင်းကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သင်တို့အဘို့အ-on အချိန် delivery မှာကတိပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူနှစ်ရှည်စီးပွားရေးထူထောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစံပြအတွက်စိတ်ဝင်စားပါက, အခမဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
Equivalent Systems: DR77X2
အဆိုပါဝိသေသ squire ပွိုင့်သည်နှင့်ကျန်ရစ်ဝက်အူ groove .It ထိုကဲ့သို့သောသော့ခတ်နိုင်တဲ့နှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာအိတ်ကျော် caret အဖြစ်လေးလံသည့်ပစ္စည်းများသင့်လျော်သည်။ ဒါဟာစက်အသုံးပြုခြင်း edging နှင့်ကော်ဇောသီချုပ်များအတွက်သင့်လျော်ကျော်ကော်ဇောအဘို့ဖြစ်၏။ DAIMOKU: ဒါဟာအပ်ချုပ်စ​​က်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ကိုက်ညီ။ ဒါဟာနှင့်ညီမျှရေးစနစ်မထားဘူး။
Equivalent Systems: DR77X1
ဒါဟာကော်ဇောအသုံးပြုမှုသီချုပ်အဘို့အစက် -DAIMOKU edging ကျော်ကော်ဇောနှင့်ကိုက်ညီမှအထူးပြု။ ဒါဟာနှင့်ညီမျှရေးစနစ်မထားဘူး။